सबैको दौड जारी छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ६ दिने भ्रमणका लागि आज चीन प्रस्थान गर्दैछन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भर्खरै भारतको सफल भ्रमण सम्पन्न गरेर शनिवार चीनतिर हान्निएका छन् । प्रचण्डको दिल्ली तीर्थाटन विवादमा पनि परेका थियो, अर्का अध्यक्ष ओली र ओली गुटका मन चिसो पार्न सफल भएको थियो । फर्कनासाथ उनले पोल खोले– २ वर्ष पछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष दिने सहमति भएको छ । प्रचण्डको दिल्ली बेइजिङ दौडाह किन ? धेरैले बुझेका छैनन् । प्रचण्डभित्र सत्ताप्राप्तिको छटपटी भन्ने अर्थ लागेको छ । मोदीसँगको भेटमा मोदीले प्रचण्डलाई तपाई भारतबाटै चुनाव लडे पनि जित्नुहुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्ने समाचारले त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको छ ।
प्रचण्ड आज चीनबाट फर्कदैछन् । फर्केपछि उनले के कस्तो राजनीतिक बिस्फोट गर्ने हुन्, सबैका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । प्रचण्डकै राइट हेण्ड भनेर चिनिने नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन भ्रमणमा निस्केका छन् । यी त भए नेकपाको शक्ति आर्जनका लागि भएका उत्तर दक्षिणतिरको दौडादौड ।
उता कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल युरोप भ्रमण गर्दैछन् । देउवाको दिल्ली भ्रमणको साइत जुराइदैछ । यी खबरका वीचमा एउटा प्रमुख व्यक्तित्व थाइलेण्ड भ्रमणमा निस्केका छन् । ज्ञानेन्द्र शाह । ज्ञानेन्द्र शाह थाइलेण्डबाट दिल्ली, दिल्लीबाट कोलम्बोको भ्रमण तालिका रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दरवारियाहरु भन्छन्– ज्ञानेन्द्र शाहले अन्तिम पारी खेल्दैछन् । यो खेलले आरपारको स्थिति बनाउनेवाला छ । सरकार मात्र होइन, पद्धति तथा चलाउने संविधान नै नोज डाइभ गरिसक्यो, यो स्थितिमा ज्ञानेन्द्र शाह अव खुल्न जरुरी छ । विदेश भ्रमण धेरै भयो, कागजी माहोल पनि धेरै भयो अव जनताको राजनीति गर्ने बेला भयो । यथार्थ रुपमा जनता र राजतन्त्रको सम्बन्ध प्रकट गर्ने बेला भयो । अमूर्त शैलीले आकार लिनैपर्छ । राजतन्त्र र हिन्दुवादीहरु अगाडि सरेर कुनै निकास निस्कन सकेन, निस्कनेवाला पनि छैन । अव केही गर्नुछ भने ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नुपर्छ । आशा, भरोसा र विश्वास हुनुपर्‍यो, त्यो विश्वासको आधार राजतन्त्रमा कायम छ ।
बलात्कार, हत्या, अराजकताले देश आक्रान्त छ । यसको जिम्मा यही सरकारले लिनुपर्छ । यो यथार्थमा असफलता छ भने यो सरकार र संविधानको छ । प्रचण्डले हत्या, बलात्कार सरकार असफल बनाउने षडयन्त्र भने, जनताले पत्याएनन् । षडयन्त्र हो भने षडयन्त्रकारी को हो ? सत्तामा बस्नेले देखाउन सक्नुपर्छ । आफै बलात्कारी लुकाउने, बचाउने, मोटो छ भन्ने, अनुहार देखाउन नसक्ने सरकार सक्षम सरकार होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिक्रियावादीहरु के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भनेर बसिरहेका छन्, दुई अध्यक्षकावीचमा अन्तरविरोध ल्याउन भाँजो हालिरहेका छन् भन्ने जुन आरोप लगाए त्यसमा पनि जनताले विश्वास गरेनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नेकपा फुटाउन खोजेको आरोप पनि लगाए । कसले ? यो भन्न सकेनन् । प्रयास गर्नेले गरे होलान्, एक भएर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कसले रोकेको छ ? नेकपाका समर्थकहरु दक्षिणको छिमेकीलाई बलियो सरकार नेपालमा बनेको पचेतेको छैन भनेर सत्तोसराप गर्छन् । दुई अध्यक्षका कतिपय मामिलामा फरक फरक विचार आइरहेका छन् । कतै नेकपाभित्रबाट फूटको धुवाँ उठेको त होइन ?
उता मधेशीहरुको तालमाल अर्कै छ । हक अधिकारका लागि मधेश फेरि बल्छ भन्न थालेका छन् महन्थ ठाकुरहरु । नेपालले भारतमा भइरहेको विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालले सहभागी नभएकाले ओली सरकारको आयु छोट्टियो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । संघीयताले निम्त्याएको स.कट, धर्म निरपेक्षताले दिएको अस्तित्वकै संकट अनि गणतान्त्रिक शासन व्वस्थाद्वारा सिर्जित नेपाल र नेपालीमािको संकटका कारण अव अन्तिम लडाइँ हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । दशैं, तिहार र छठपछि नेपाली राजनीतिले ठोस बाटो लिने सम्भाबना बलियो बन्दैछ । हिन्दुराष्ट र राजतन्त्रलाई स्थान दिनैपर्नेछ ।
नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र नै हो । यसमा विप्लववादीहरुले विद्रोह गरिरहेका छन्, तिनको कुरा सुन्नुपर्ने वाध्यता पनि छ । मधेशवादीहरुको माँग वार्ताबाट समाधान हुनसक्छ । उनीहरुको माँग राष्ट्रिय एकता नभाँडिने गरी निकास निकाल्न नसकिने छैन ।
रह्यो सीके लाल, सीके राउतहरुको बिखण्डनवादी आवाज । विखण्डन न संविधानले सहन्छ, न कुनै नेपालीले नै सहन्छन् । नेपाल टुक्य्राउने, बिखण्डन गर्ने कुरा दिवा सपना हो । आजको युगमा नेपाललाई टुक्य्राएर मधेशलाई अलग देश बनाउने जुन कुरा उठेका छन्, उठाइएका छन्, यस्ता आवाजहरुलाई समन गर्ने सुरक्षा निकायले हो, नसके सेनाले सक्छ । नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले पदबहाल गरेकै दिन भनिसकेका छन्– बिखण्डनवादलाई नेपाली सेनाले सहन गर्न सक्दैन । परिआए यस्ता आवाजलाई दबाइनेछ । दबाउनै पर्छ । आन्तरिक हक अधिकारका कुरा गर्न सकिन्छ, झगडा हुनसक्छ, वार्ता र सहमति खोज्नुपर्छ । देशै भत्काउँछु, अलग देश बनाउँछु भन्ने कुरा कुनै पनि नेपालीका लागि सह्य कुरा होइनन् ।
नेपाल समस्यामा छ, हरेक समस्या सुल्झाउने समय आएकै हो ।